Liberio (papa) - Wikipedia
I Liberio dia evekan'i Rôma izay nanomboka nisahana izany asa izany tamin'ny 17 May 352 sady heverina araka ny lovantsofina katolika fa papa faha-36. Tsy fantatra ny fotona nahaterahany. Maty tamin'ny 24 Septambra izy.
Tamin'ny fotoana nisian'ny fahasahiranana nateraky ny fielezan'ny arianisma tamin'ny androny, izy dia isan'ny mpitarika ny antoko nikeana (na niseana) izay nanohitra ny antoko ariana notohanan'ny emperora Konstantio II, izay nahatonga azy ho natao sesitany. Nanaraka ny fampianarana arianista nomban'ity emperora ity avy eo i Liberio, nefa rehefa maty ny emperora dia nanaraka ny fampianarana nikeana amin'izay izy.
I Liberio no eveka voalohany niantso ny tenany ho "evekan'ny Fiketrahana apostolika", manam-pahefana ara-panahy ao Rôma. Ny fitondrana maha papa azy anefa nomarihin'ireo fivadihan-kevitra tampoka sy ny fahasarotan'ny fihazonana ny firaisan'ny fiangonana kristiana isan-toerana.
1.1 Zava-nisy tamin'izany fotoana izany
1.2 I Liberio, eveka niseana
1.4 Fodiana tany Rôma
Zava-nisy tamin'izany fotoana izany[hanova | hanova ny fango]
I Liberio (izay atao amin'ny teny latina hoe Liberius) dia manam-piaviana romana izay teraka tamin'ny daty tsy fantatra, nahazo ny fitondrana maha evekan'i Rôma tamin'ny 17 Mey 352 rehefa maty ny eveka Jolio I, tamin'ny fotoana nianjadian'ny fahasahiranana vokatry ny arianisma izay nahazo ny fiangonana kristiana manontolo. Nanohana ny arianisma mantsy ny emperora Konstantio II izay hany emperora tokana nanomboka tamin'ny taona 353, sahala amin'ny ankamaroan'ny mpitondra fivavahana tatsinanana tao amin'ny Empira romana. Ny emperora izay nitarika ny politikan'ny fiangonana dia nikendry ny firaisana ara-pivavahana sady nankasitraka ny handroahana ny eveka tandrefana (izay nitondra ny hevitr'i Atanasiosy na Atanazy avy any Aleksandria izay naongana tamin'ny konsily voalohany tao Tiro tamin'ny taona 335) nahitana maro anisa nomba ny firehana nikeana; ity emperora ity koa dia nanao amboletra hampanjakana ny fiekem-pinoana ariana nankatoavina amin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 351 tao Smirnioma.
I Liberio, eveka niseana[hanova | hanova ny fango]
Volana vitsy taorian'ny nahavoafidy eveka an'i Liberio dia namory sinoda tao Rôma izy izay niezahany hanamarinana an'i Atanasiosy (Atanazy), tahaka ny nataon'i Jolio eveka nodimbiasiny, alohan'ny hangatahany amin'ny emperora ny hanaovanan konsily lehibe ao Akoileia mba hamahàna ny tsy fifanarahana ara-telojia sy ara-pitsipi-pifehezana nampifanohitra ny eveka tatsinana sy ny eveka tandrefana. Noho izany dia namory sinoda tao Arelata (frantsay: Arles) i Konstantio II, izay nankalaza tao koa ny fahatelopolo taonan'ny fitondrany (latina: tricennalia), tsy tonga tao i Liberio fa nandefa solontena roa mba hanohana ny fikasany hampanao konsily, nefa nomba ny fanamelohana an'i Atanazy ireto solontena roa ireto noho ny fanerena azy ireo.
Nanda ny hoe nandefa solontena i Liberio ka niezaka nanetsika ny eveka italiana hanohitra ilay sinoda nampanaovin'i Konstantio II, ankoatry ny toe-javatra mihatra amin'i Atanasiosy, dia nanindry mafy izy fa ny fiekem-pinoan'i Nikea (na Nisea) izay nankatoavin'i Konstantino rainy no voatohintohina, dia nangataka tamin'i Konstantio ny hanaovana konsily lehibe vaovao izy, ka niresaka tamin'ny emperora amin'ny maha "evekan'ny Fiketrahana apostolika" (latina: sedes apostolica) azy.
Nanaiky i Konstantio ka niantso konsily tao Milano, izay nisy ny toeram-ponenany maha emperora azy; nizotra nandritra ny fahavaratry ny taona 355 (ila-bolantany avaratra) izany konsily izany, izay nahavory ny ankamaroan'ny eveka tao amin'ny fiangonana tandrefana. Nandefa an'i Losifera avy any Karalisy (italiana: Cagliari; latina: Caralis), niaraka tamin'ny pretra Pankratio sy ny diakra Hilario, i Liberio, nefa tsy nisy zavatra noresahina tamin'izany afa-tsy ny fanamelohana an'i Atanazy, izay tsy nankasitrahin'ireo solontena avy any Rôma, izay nasesitany tany Atsinanana niaraka tamin'ny mpanoha riana hafa, araka ny didin'i Konstantio. Niezaka nitaona an'i Liberio hitovy fijery aminy ny emperora ka nandefa iraka (dia ny eonoka atao hoe Eosebio) tany aminy, nampitondra vola ho an'ny mahantra any amin'ny Fiangonana romana ny emperora. Tsy nanaiky hovidina tahaka izany i Liberio izay notohanan'ny mpitondra fivavahana teo an-toerana izay mbola niray hina, ka nandroaka ny iraky ny emperora any ivelan'ny bazilika Masindahy Piera izay saika hametrahan'io iraka io ny fanomezana avy amin'ny emperora teo amin'izay ataon'ny lovantsofina ho fasan'i Masindahy Piera. Nanapa-kevitra ny handrava izany fanoherana izany i Konstantio ka nandidy ny solontenam-panjakana nitondra an'i Rôma atao hoe Flavio Leontinio mba hisambotra an'i Liberio izay efa nalaina ankeriny mandritra ny alina ka nentina tany Milano tamin'ny fararanon'ny taona 355 (any amin'ny ila-bolantany avaratra), mba tsy hisian'ny savorovorom-bahoaka.
Tao Milano, tao anaty fihaonana miserana tamin'i Konstantio, ny prelata rômana dia nanda indray ny hanameloka an'i Atanasiosy "raha tsy naheno ny teniny" sady nitady ny fankatoavan'ny eveka tatsinanana ny fanekem-pinoan'i Nikea. Izany fihetsika izany dia tsy mamela ny hisian'ny fifanakalozan-kevitra ka nahatonga ny emperora hanao sesitany azy tamin'ny volana Jona 356 tany Tràka any Beroia (na Berea). Nandritra ny volana maro tany an-tsesitany sy noho ny fandresen-dahatry ny eveka ariana Demofilo azy dia nihalefy ny fahenterana sy ny herin-tsain'i Liberio ka nanamora ny fialany amin'ny heviny izany: nanaraka ny fireham-pampianarana nandidian'ny emperora izy, nandefa taratasy maro tany amin'ny eveka manaiky ny arianisma mba hanazava fa maniry dia maniry ny hody any Rôma izy na inona na inona takalon'izany, ka tamin'ny farany izy dia nankato ny fanamelohana an'i Atanasiosy sy ny fiekem-pinoana voalohan'i Smirmioma — izay tsy manaiky ny firaisam-pomba na firaisa-maha izy azy (latina: consubstatialita) lazain'ny fiekem-pinoana nikeana — tanàna namindrana azy tamin'ny taona 358.
Rehefa tsy teo i Liberio dia ny arsidiakra Feliksa no nohosoran'i Eodoksa (eveka homeana mpankasitraka an'i Konstantio) ho evekan'i Rôma, nefa tsy nisy antoka ara-teolojika nangatahina taminy. Ny emperora koa dia namerina sy nanamafy ny tombontsoa manokana sy ny fanomezam-pahalalahana ny mpitondra fivavahana ao Rôma tsy hanatanteraka zavatra sasany ho an'ny emperora sy ho an'ny ankamaroan'ny mpitondra fivavahana — ka mety isan'izany i Damaso I — izay nomba ny eveka vaovao. Ny diakra Orsino sy Amantio sy ny pretra maro hafa anefa tsy niala tamin'ny fanoavany an'i Liberio, ka nahatonga an'i Feliksa ho mpampizara fiangonana sy tsy ho tiam-bahoaka izany. Izany dia vavolombelona fa ny ady hevitra ara-teolojia dia tsy natokana ho an'ireo manam-pahaizana fa nandray anjara tamin'ny fanambaràna teo anatrehan'ny emperora ny fitiavany ny evekany sy ny amin'ny foto-pampianarana nikeana ny mpino rômana. Ankoatra izany dia nisy vehivavy manan-kaja maro teo amin'ny vahoaka rômana, nihaingo ka nirahina ho any amin'i Konstantio mba hangataka ny hampodiana an'i Liberio avy any an-tsesitany, ka nanaiky ny emperora mba hampitoniana ny tabataba tao an-tanàna, raha hiara-mitantana i Liberio sy i Feliksa.
Fodiana tany Rôma[hanova | hanova ny fango]
Iray taona mahery taorian'ny fanapahan-kevitry ny emperora, mety tamin'ny fahavaratry ny taona 358, dia nody tany Rôma i Liberio. Nandray azy tamin-kafaliana ny vahoaka, fa ireo namany mpomba ny fampianarana niseana toa an-dry Atanasiosy sy i Hieronimo (na Jerôma) avy any Stridona ary i Hilario avy any Piktavio dia nihevitra fa fahadisoana lehibe ny fihemorany. Nanoratra i Hilario fa "tsy fantatra raha ny fanaovan-tsesitany an'i Liberio na ny fampodiana azy any Rôma no heloka bevava kokoa nataon'i Konstantio". Ny fanoheran'i Feliksa ny fodian'i Liberio dia noravan'ny mpino kristiana rômana sy ny Loholom-panjakana (Senata), ka fitsabahan'io andrim-panjakana io voalohany amin'ny raharahan'ny Fiangonana izany; tokony hisintaka any amin'ny tanàna ivelan'i Rôma i Feliksa nefa hoatry ny nisy ihany ny fifanarahana teo amin'ny eveka roa tonta ary i Rôma dia nanana eveka roa teo anelanelan'ny taona 358 sy 365 nahafatesan'i Feliksa.
Izany zava-nitranga rehetra izany dia nahatonga ny Fiangonan'i Rôma halemy ka nahatonga azy tsy nanatrika ny konsily tao Riminy tamin'ny taona 359 izay nivorian'ny eveka rehetra eran'ny tany Andrefana, izay nahatratra 400 any ho any, ka eveka hafa no nitarika ny fivoriana fa tsy ny an'i Rôma. Raha toa nanjaka manerana ny Empira ny arianisma homeana, ny fahafatesan'i Konstantio tamin'ny taona 361 dia nanova ny toe-java-misy. Na dia teo aza ny politikan'i Joliano izay misy fandeferana kokoa dia tsy nahafahan'i Liberio nanomboka zavatra lehibe ny fahaverezan'ny maha to teny azy. Na dia izany aza dia nihaniverina ny hasin'i Liberio ka lasa nanohana ny fampianarana nikeana amin'izay izy, ka nanafoana tamin'ny alalan'ny didy ny fanapahan-kevitra arianista natao tao Riminy, nefa niangavy ny eveka italiana mba l Liberio mba hiombona amin'ny eveka nankato ity konsily ity raha toa ka hanaraka ny fiekem-pinoan'i Nikea izy ireo. Mbola nanohana ny konsily manohitra ny arianisma sy ny homeôosiana n'i Lampaska, izay nanohitra koa ny fanapahan-kevitra tao Riminy, tamin'ny taona 364 izy.
Nomarihin'ny fisian'ny filaminan'ny antoko mpifanohitra sy ny fifanatonana tamin'ny eveka tatsinanana nandray azy tamin'ny taona 365 na 366, izay tsy maintsy nanaja fepetra mitovy, ka nanamelohany ny sabelianisma noho ny fangatahan'izy ireo, nefa tsy nohelohiny manokana i Markelosy avy any Ankira izay nisarahan'i Atanasiosy. Na dia nihanahazo fankatoavan'ny maro aza i Liberio dia ny toe-javatra mikorontana nampiavaka ny fifandimbiasan-toerana tao Rôma taorian'ny fahafatesany (24 Septambra 366) dia toa manaporofo ny fahalemen'ny fitondrany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberio_(papa)&oldid=980112"
Voaova farany tamin'ny 26 Janoary 2020 amin'ny 04:13 ity pejy ity.